Ny mpamorona anay - FOSHAN GOODTONE FURNITURE CO., LTD
Peter Horn, mpanorina ny Horn Design and Engineering, dia nandany ny 15 taona farany namoronana sy namolavola fanaka birao sy mekanika synchro-tilt ergonomic.
Martin Ballendat, mpanorina ny Design Ballendant, dia nitarika ny ekipany mpanan-talenta hanambatra ny teknolojia, ny fampiharana ary ny zavakanto amin'ny endrika tsotra nanomboka tamin'ny 1995.
Mino izy fa amin'ny fampidirana ny famolavolana amin'ny fandraharahana sy ny fampiakarana azy ho amin'ny stratejika amin'ny orinasa, ary ny famahana stratejika olana amin'ny fampandrosoana, dia afaka mampiroborobo ny fahombiazan'ny orinasa izany.
Design Joyn avy any Korea Atsimo.Joyn fikatsahana ny filozofia famolavolana dia mitarika fomba lamaody vaovao, ny curve ny fifadian-kanina, malaza collocation collocation ary ergonomic famolavolana ny vahoaka.
Amin'ny maha CCO an'ny Xcellent Products International Design Team any Taiwan, Ader Chen dia niasa ho an'ny Palo Alto Design Group sy Flextronics International teo aloha, nanangona traikefa be dia be momba ny fanatanterahana sy ny fitantanana iraisam-pirenena.
Goodtone dia mandray ny famolavolana ho foto-kevitra farany.Ary ny rohy tsirairay dia tarihin'ny famolavolana.Manangona mpamorona miavaka eo an-toerana, ary nahatratra fiaraha-miasa stratejika miaraka amin'ireo mpamorona iraisam-pirenena ambony toa an'i Alemaina sy Etazonia.Miaraka amin'ny loharanon-drafitra tsara maro, Goodtone dia nampiditra endrika tsara kokoa hanompoana ny tsena.Ary miezaka manangana marika seza birao tany am-boalohany sinoa misy fiantraikany iraisam-pirenena.
Raha te hahalala bebe kokoa ianao dia afaka mifandray amiko
Seza birao hoditra seza misy tanjona maro Seza tohana ho an'ny lumbar ho an'ny trano Seza mihodinkodina maoderina Seza birao avo lenta Seza Mpanatanteraka Luxury